မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို ချောက်ထဲအထိဆွဲချသွားမယ့် လူတွေကိုပြောလာတဲ့အီဗရာ – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ လိုက်ဇက်အသင်းကိုရှုံးနိမ့်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ကနေ နှုတ်ဆက်ပြီး ထွက်ခွာခဲ့ရပါပြီ……
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အနေ နဲ့ ဘာတွေ လိုအပ်ခဲ့တာလဲ ဘာကြောင့် ရှုံးနိမ့်ရတာလည်းဆိုတာကို မန်ယူနောက်ခံလူဟောင်း အီဗရာကပြောခဲ့ပါတယ်….
အီဗရာ ” ဒီပွဲရလဒ်ကြောင့် ကျနော်အရမ်းစိတ်ထိခိုက်နေမိပြီ…..ကျနော်တို့ ဟာ အသင်းနဲ့တသားတည်းကျတဲ့အချိန်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာလေဗျာ…..ကျနော်ထပ်ပြောချင်တာက ကျနော်က အကောင်းမြင်သမားပါ…အခုဝေဖန်တယ်ဆိုတာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုချစ်လို့ ဆိုတာ သိပါစေ….ကျနော်ဘယ်လောက်အသင်းကို အလေးနက်ထားတယ်ဆိုတာ အက်ဝုဒ်ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်…
အမှားတွေကိုစပြောရမယ်ဆို ကစားကွက် ဆိုးရှားဟာ ဘာရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် ဒီကစားကွက်ကိုသုံးခဲ့ရတာလဲ ရှောက သက်သာခါစလေ ပြီးတော့ ရှော တဲ့လစ် နဲ့ ရတ်ဖို့ တို့ တောင်ပံတိုက်စစ်အားသာတဲ့ လူသုံးယောက်ဟာ ဒီပွဲမှာ ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး…..နောက်တန်းမှာ လည်း လင်ဒီလော့ မက်ကွိုင်းယားတို့ ဟာ အံ့အားသင့်နေကြတယ်….လူမကပ်ဘူး တကယ်အားနည်းချက်က နောက်တန်းခံစစ်မှူးတွေ ဂိုးမပေးရဖို့ကို သူတို့တွေ ဘာဘဲလုပ်ရလုပ်ရဆိုတဲ့ စိတ်မရှိခဲ့ကြဘူး….
တိုက်စစ်မှာ ဂရင်းဝုဒ်ဟာ တကိုယ်ကောင်းဆန်နေခဲ့တယ်…..ပေါ့ဘာကို နောက်မှထည့်တယ် ကွင်းလယ်မှာ တိုက်စစ်ဖက်အားနည်းတဲ့ မာတစ်ကို တော်မီနေးနဲ့တွဲထားတယ် တော်မီနေး နဲ့ မာတစ်တွဲထားလို့မရတာ အရင်ပွဲတွေတုန်းကလည်း ကြုံပြီးသားဘဲလေ….ဘာလို့ထပ်သုံးလည်း နားလည်လို့မရဘူး……
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက နည်းပြ နဲ့ နောက်တန်းဟာ မန်ယူအသင်းကို ချောက်ထဲကို ဆွဲချနေတယ်ဆိုတာကို သိစေချင်ပါတယ်..နောက်ပြီး ဗဟိုခံစစ်မှူးတွေကို လဲပစ်ဖို့ ကြိုးစားချင်စေချင်ပါပြီ…..ဟု အီဗရာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်…
အထုတ်ခံရမယ့်နည်းပြအဖြစ် အလေးပေးမှုမှာ ဆိုးလ်ရှား ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်နေ